Tinofanira kuziva here hupenyu hweApple Watch patinoitenga? | IPhone nhau
Hupenyu hunobatsira hweApple Watch, dambudziko kana uchitenga
Iyo Apple Watch iri kukonzera kusahadzika kune vazhinji vedu kana tichifunga kuti toitenga here kana kuti kwete. Ichi chigadzirwa chitsva, chatinoziva zvishoma uye chatisingazive kana tichizokwanisa kuibuditsa mairi. inobatsira muzuva redu zuva nezuva. Uye ichi chimwe chinhu chatinoda kujekerwa nezvacho tisati tashandisa yakawanda mari, kunyangwe zvakadaro pachigadzirwa seyakavanzika se wachi.
Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana, kune izvi zvinowedzerwa kuti isu hatizive kuti iyo yekuvandudza kutenderera kwechinhu ichi ichave yakareba sei. Iine iyo iPhones, iPads, uye Macs (kwete neApple TV isina hanya) isu tinoziva kuti tichazokwanisa kuona riini modhi uye nekufungidzira hupenyu hunobatsira uhwo huchave nahwo, asi neApple Watch hatinyatso kuziva izvi uye kana iyo yazvino modhi kuvandudzwa.
Chinhu chine musoro chingafunge nezvekuona kuvandudzwa makore maviri ega ega, zvimwe kana zvishoma. Nekudaro, hapana munhu anotivimbisa kuti isu hatisi kuona a Apple Watch 2 pachiitiko chinotevera munaGunyana. Izvi hazvaizove dambudziko dai yaive smartphone kana piritsi, asi hazvisi. Kana isu tichitenga wachi isu hatifunge nezve kuimutsiridza gore rega rega, saka nei tichifanira kuzviita neiyi?
Neraki kwatiri, musika wekutengesa unogara uchibata zvigadzirwa zveApple zvakanyatsonaka, saka tinogara tine mukana wekuziva kuti, kana modhi nyowani ikabuda uye tichida kuitenga, tichakwanisa kutengesa yedu Apple Watch ku mutengo usati uri kure nezvawakatitengera pakutanga.
Uye iwe, watove neako Apple Watch?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Hupenyu hunobatsira hweApple Watch, dambudziko kana uchitenga
Ini handina kubiridzirwa akadaro
Ini handisati ndave nayo uye ndichamirira kusvika yava 5 ATM uye yabatanidza GPS.
Ini ndoda kuve neApple Watch asi ini parizvino ndine iPhone 4S asi mubvunzo wangu ndouyu:
Pandinongogamuchira wachi yeapuro, ndinogona kuishandisa ndisina kuibatanidza neiyo iPhone? Ndiri kureva, ndaigona kuitisa iyo pasina iyo iPhone?
Ndinoda kuti mumwe munhu agadzirise uyu mubvunzo mukuru wandinawo, maita basa.
ne4s uchaita zvakanaka…. hazvibatsiri! iwe unoda hushoma hwe 5. verenga pane iro apuro peji.
Iwe haugone kuimisikidza ne4S, uchafanirwa kutsvaga shamwari ine 5 kana yakakwira kuti umire kuve wepepaweight
Mufananidzo weFernando Ortega akadaro
Ini ndinobvuma, 5ATM ndiyo shoma yaunobvunza wachi. Chokwadi isu tichaenda kuona kudonhedza-mukati kuendesa, ini ndinomirira kuti ndione yekuzvarwa kunyorera kuri kushanda nekuti izvozvi zviripo, munhu wese anoti iro rakasvibira girini.
Muchidimbu izvi zvinondifungisa pandakatenga iyo iPad 1, yakashandurwa isingabatsiri munguva pfupi. Iyo ipad 2 ichiri kushanda pasina matambudziko uye inoramba ichingovandudza.
Pindura Fernando Ortega
Ini zvechokwadi ndichamirira chizvarwa chechipiri
Zvinotarisirwa kuti ubatanidze neiyo iPhone (kubva pa5s) kuti ukwanise kuwana zvinoenderana nharembozha, inogona kushandiswa pasina kubatanidza, Chiitiko chemuviri, kurova kwemoyo uye zvirokwazvo wachi.
Kuzadza kwakachena! Kunyora zororo iri zvirinani! 😉
Mhoroi, ndichiona kuzara kweApple Store muBarcelona izere nevanhu vachiri kutengesa nhasi, mushure memazuva mashoma mushure mekumisikidzwa, ini handizozvitenge. Uye mazhinji AIVA asiri iwo MUTAMBO modhi. Saka ndinofunga kuti Apple ikangoona mhedzisiro yezvemari, hatingazeze kwekanguva kuona kuti tichaona Watch2 gore rinouya. Vakomana, iri ibhizinesi, uye mune humbowo hwaro nemimwe michina, gore rimwe nerimwe vanovandudzwa uye zvinopfuura chimwe hazvingadi. Kana kuti ndeyekuti kubva paiyo iPhone 6 kusvika pa6S pachave nemusiyano unoshamisa zvekuti iyo 6 haichashandi? Ini ndakati, kakawanda ndanga ndiri fanboy ndichida zvese uye wekutanga, asi newachi ini ndichamirira kusvikira gore rinouya vatipe neinowoneka Watch2 uye ndiani anoziva zvinowirirana zvine chekuita nekushanda / mutengo. Neiyi vhezheni yekutanga, ini handina kuona chishandiso chandaitarisira mumunhu. Kwaziwai!
Mangwana ini pakupedzisira ndichaenda kunotora mutambo wangu mutema weApple Watch netambo nhema, ndiri kuenda kunoona kana zvaive zvakakodzera kushandisa 469 euros… Ndakaona mavhidhiyo mazhinji eelvieja anotsanangura zvese, uye panguva ino ndinonyatsoda !!!
Ini ndichamirira iyo Watch2 sezvo ini ndichifunga kuti izvo zvavachasanganisira inguva yekutarisana, iyi vhezheni (1a) yaive njodzi yaApple kuona kana ichigona kukwikwidzana nemamwe mawatch uye sezviri pachena haina kuita zvakaipa, saka haina Nhau dzakawanda kwazvo parunhare, saka zviri nani ndimirire 2
Iyo haina kumbobvira yaiswa kutengeswa kuSpain uye vamwe vachifunga nezve2th Generations ... ndanga ndiine yangu kwevhiki dzinoverengeka uye chokwadi ndechekuti ndiri kufara kwazvo. Mune yangu nyaya inoita zvese zvandinoda uye zvimwe zvinhu, sekukwanisa kugadzira, kupindura runhare kubva pawachi, kugamuchira, kupindura mameseji, Teregiramu yatove kushanda pa1.000 zvishamiso zvaunogona kupindura kubva paawa, karenda, zviyeuchidzo, ngatitore enda kwandiri izvi zvakakwana kwazvo. Uye isu tichiri kudiwa kuti tigamuchire iyo nyowani nyowani, kana mumaonero angu mutengo wayo unofanirwa kunge ungangoita 100 euros.
Isu tinofunga nezvezvizvarwa zvechipiri, nekuti wachi haitipe isu € 2 sevashandi veApple. Kana iyo yekupedzisira kana iyo haina kupihwa vatengi vayo vanovimba mazera ekutanga, uye ivo havashandise inokwezva dhisikaundi kwatiri pakuvandudza, kune zvese izvi ini zvandinofunga uye kufunga. Because Uye nekuti nanhasi ndatove ndaverenga zvinyorwa zvishoma nezvechizvarwa chechipiri izvo zvingangosvika pasingasviki gore. Nekuti iyo nguva yave nemwedzi yakabuda, kunyangwe kuno kuSpain kwaingova nemazuva chete. Zvakajairika kuti kune maonero emarudzi ese. Ini, ndinodzokorora, ndinomirira, ndave ndichizviita kwemwedzi, hazvibve kune zvimwe zvishoma.
Mhoro munhu wese, ini ndichaedza kuve nechinangwa sezvinobvira !! Ini ndinobva kuMadrid, handizive kuti sei ndichida kuve nemaapuro angu matsva musi iwoyo wavanenge vachienda kumusika. Ndakaverenga nekuteerera kune zvese, asi ini ndinozvibvumira kutorwa nehungwaru hwangu uye kusvika zvino handina kunge ndakashata. Kana chiri chinyorwa chandisingabvumirani nacho, kana tichienzanisa wachi newachiwachi ipi neipi, haina chekuita, Gadget iyi ndiMambo, ndiko kuwedzerwa kweiyo iPhone, kana iwe uchida iyo iPhone wachi ichawedzera sarudzo yako, ichokwadi INCREDIBLE mune yayo yekutanga vhezheni kunyangwe iine mamwe maburi, asi isu hatina kunyanyisa kushora yekutanga vhezheni ye iPhone futi. Ndine chokwadi chakazara chekuti Sport version yangu grey wachi haizove yega yandichava nayo uye zvinondikurudzira kufunga kuti ndichagara ndichivandudza gore rimwe nerimwe, muchidimbu iko kushanduka kwekusingaperi kusiri kushata zvachose. Ini ndinogona kungotaura kuti yakapfuura zvandaitarisira mumaawa angu makumi mana ekutanga ekushandisa, zvinoshamisa!
iOS 9 inosanganisira sarudzo yekuchengetedza PDF kuBooks